Apple Park, ọnụahịa Apple Music, MateBook X, iTunes 12.6.1.27, MacBook dị mkpa karịa na ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Apple Park, ọnụahịa Apple Music, MateBook X, iTunes 12.6.1.27, MacBook dị mkpa karịa na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Egwuregwu Apple, ọtụtụ
Anyị mechara otu izu ọhụrụ na Soy de Mac na nchịkọta nke kpochapụla, mkpokọta nke izu a na-abata na ọtụtụ akụkọ metụtara ụwa nke apụl bitten. Yabụ na-ebutụghị oge anyị ga-ebido site na ozi kachasị anya na blọọgụ anyị n'izu a gara aga.
Obi abụọ adịghị ya, dị ka WWDC izu 2017, enwere ọtụtụ asịrị nke ihe anyị nwere ike ịhụ na Ihe ngosi nke Nzukọ Ndị Omeiwu Apple. Ka anyị bido!
Mpempe akwụkwọ mbụ anyị chọrọ ichetara gị bụ nke gosipụtara vidiyo ọhụrụ nke Apple Park. Oge a vidiyo nke ị nwere ike ịhụ Apple Park na ọdịda anyanwụ na ọtụtụ nrụnye eletrik arụ ọrụ zuru oke. Duncal Sinfield ọzọ Ọ gara njem ọhụụ na Apple Park, kama ịnya ụgbọ mmiri ya, ịga njem nkeji tupu anyanwụ ada.
Saidnye Kwuru Apple Adịghị anọgide Na-aba Uru? Dị ka otu ọmụmụ si Onye nyocha Bullish, Apple nwere ike ibu ụlọ ọrụ puku ijeri dollar na 2019. Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere usoro nyocha na atụmatụ dịka ike nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, nke na-eme ka ọtụtụ ndị ọkachamara nyocha chee echiche banyere Apple ibu a trillion dollar ụlọ ọrụ.
O yiri ka Apple ọ ga-akwụsị inyefe ya egwu egwu ya n'efu maka ọnwa atọ mbụ ndị ọrụ ọhụụ yana ugbu a ọ ga-eri euro 0,99. Na ụkpụrụ, ọ bụghị ihe nwere ike imetụta akpa ndị ọrụ ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka otu euro, mana ọ na-eju anyị anya na na mberede nke ndị Cupertino na-akwụsị ịnye ọnwa atọ a nke nnwale n'efu n'efu dịka ha mere site na mbido mgbe ebidoro ya ọrụ egwu a nke ụlọ ọrụ.
Izu a ka Huawei gosipụtara laptọọpụ ọhụrụ, MateBook X. Kọmputa a nke doro anya na Windows 10 sistemụ arụmọrụ na-enye onye ọrụ ikuku ọhụrụ maka nkọwa na karịa ihe niile, ọ yiri nke a na-arụ ọrụ nke Apple 12-anụ ọhịa MacBook.
Ọtụtụ ndị ọrụ n'izu a natara mmelite nke iTunes ka mbipute 12.6.1.27. Na nke a ụdị ọhụụ O yiri ka ụfọdụ akụkụ nke arụmọrụ iTunes ka edozila, enweghị ọtụtụ nkọwa nke ụdị ọhụrụ a na ndetu. O kwere omume na n'oge ikpeazụ a, ụdị ọhụrụ ahụ eruola ndị ọrụ ndị ọzọ.
El ọkara Fobers na-ekwughachi ọzọ n'afọ a 2017 na-etinye Apple dị ka ihe kachasị baa uru na ụwa, ọ bụkwa ndị nke Cupertino anọwo n'elu ndepụta a afọ asaa kere site na magazin. A na-echekwa ọchịchị Apple site na ngwaahịa ndị o nwere na katalọgụ ya na iphone dị ka kpakpando, na nke a dịka Forbes ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmatụ atụmatụ $ 170.000 ijeri, na-abawanye 10% karịa ọnụ ọgụgụ nke afọ gara aga ma atụ anya na mmụba a agaghị akwụsị na afọ ndị na-abịanụ.
Nke a na ozi ọma adawo nke ọma n'etiti ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ nke apụl ika kọmputa na o yiri ka ndị ọzọ na nsụgharị nke MacBook Pro nwere ike si n'aka nke ọhụrụ Thunderbolt 3 site na USB-C na efere onwe ya ọ bụkwa na Intel wepụtara nkọwa nke kwuru Okwu. N'ụzọ dị otú a, ndị na-emepụta ngwaọrụ, gụnyere Apple, ga-enwe ike itinye ya na ngwaọrụ ha na efere akụrụngwa n'onwe ha na-enweghị akwụ ụgwọ ụgwọ.
Dị ka ọ bụghị naanị ngwa kamakwa ngwaike ngwaike, ndị mmepe na-enye ngwa nwere otutu njirimara, atụmatụ ndị na-enye anyị ohere ịhapụ usoro nhazi n'akụkụ ụfọdụ, ọkachasị n'ihe banyere akwụkwọ ịkpọ oku agbamakwụkwọ, akwụkwọ ozi, ozi ekele ma ọ bụ ọbụlagodi ngosi, dị ka ngwa Gburugburu Mill, ngwa nke na-enye anyị ndebiri nde Isi Ihe Nleba 150 dị elu, ha niile lekọtara ruo obere ihe. Gburugburu Mill nwere ọnụahịa mgbe niile nke euro 24,99 na Mac App Store ma chọọ opekata mpe nchekwa 1 GB na Mac anyị.Ọ bụrụ na ịchọrọ ka amara gị maka onyinye ndị a, banye na www.macappstoresale.com.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Apple Park, ọnụahịa Apple Music, MateBook X, iTunes 12.6.1.27, MacBook dị mkpa karịa na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Ihe ndị a bụ ngwaahịa Apple ochie dị ka nke June 30, 2017